ओलीसँग पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेका थिए उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ओलीसँग पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेका थिए उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय !
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायालय आन्दोलित छ।दशैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा राणाले, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न माग गरेका थिए। जसअनुसार उनका जेठान गजेन्द्र हमालको नियुक्ति पनि भएको थियो। मन्त्रीको सपथ लिएका हमालले चर्को आलोचनापछि राजीनामा दिए।
बारले बहिष्कार र सहकर्मी न्यायाधीशले अवज्ञा गरेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन।’ जबरालाई बहिर्गमनका लागि पूर्वप्रधा